Sigstr: Gadzira, Shandisa, uye Wera Email Yako Signature Campaign | Martech Zone
E-mail yega yega iri kutumirwa kunze kwebhokisi rako rekunyora ndiyo mukana wekushambadzira. Ipo isu tichitumira tsamba yedu tsamba kune toni yevanonyoresa, isu tinotumirawo mamwe maemail e20,000 mukutaurirana kwezuva nezuva kumashure nekudzoka pakati pevashandi, vatengi, tarisiro, uye neruzhinji hukama hukama. Kukumbira wese munhu kuti awedzere bhenji kusimudzira chena bepa kana iri kuuya webinar kazhinji inopfuura nekubudirira kudiki. Vazhinji vanhu vanongozeya chikumbiro, vamwe vanokanganisa chinongedzo, uye vanhu vangangobaya iyo yekudaidzira-kuita havamboiwana.
Kana iwe usingatende kuti masiginecha emaimeri akakosha, tarisa ichi cheki chekutarisa kupisa kwemapu kubva Eyequant.
Ikoko ndiko Sigstr inopinda! Sigstr inopa central management yeemail yako siginecha mishandirapamwe apo vese vashandisi vanogona kuongororwa ipapo ipapo. Mishandirapamwe inogona kuvakwa nekukanda mufananidzo kana kuisa zvinyorwa. Vashandi vako havafanirwe kugadzirisa tambo imwe chete yekodhi - yako timu yekushambadzira inogona kuchinjisa mishandirapamwe pese pavanoda.
Sigstr inotopa shanduro dzakasarudzika dzemushandirapamwe wedesktop nedesktop nekutarisisa kwevaviri. Uye zvechokwadi, Sigstr inopa yakapusa analytics kuratidza huwandu hwenguva iyo mushandirapamwe waionekwa pamwe nekudzvanywa nemushandirapamwe kana nemushandi!
Sigstr zvakare inobvumira mapoka kugadzirwa. Ichi chinhu chakanakisa sezvo uchigona kuve neboka reboka rako rekutsigira rakapihwa mushandirapamwe uchisimudzira chigadzirwa chitsva, nepo boka rako rekushandira rakapihwa Mushandirapamwe weKeji Peji, nepo timu yako yekutengesa ichisimudzira bepa jena paRudzo pane Investment yemhinduro yako!
Izvi zvinobvumira vashandisi kuwedzerwa mumapoka uye ipapo boka rega rega rinogona kuwedzerwa kune yakatarwa mishandirapamwe! Ndainakidzwa kwazvo Sigstr izvo isu takasaina ipapo ipapo - uye zvave zvakafadza kushandisa nekugadzirisa kune vedu vashandi.
Sigstr Email Siginecha Kubatanidza
Kuendesa Sigstr yakapusa pane chero bhizinesi sezvo ivo vava nekubatana neAlex Directory, Outlook, Exchange, Hofisi 365, Google Suite, Gmail uye Apple Mail.
Mutemo-On - Simbisa kushambadzira kwako mukati meMutemo-Pa nekuisa siginecha yeSigstr uye mushandirapamwe kune yako Mutemo-Pane email kutaurirana.
Hubspot - Sigstr zvakare ine kusangana pamwe Hubspot kwaunogona kuenderana chero Hubspot Smart Chinyorwa uye ugozvipa kune yakatarwa Sigstr ABM mushandirapamwe, ona zviitiko zvenguva mu Hubspot pavanodzvanya, auto-gadzira Hubspot vanofambidzana zvichibva navanotumira email, uye vanoshandisa email siginecha kudyidzana kunoshanda Hubspot Workflows!
Marketo - Gadzirisa yako siginecha kushambadzira neMarketo Smart Lists uye Landing Mapeji. Iwe unogona zvakare kusanganisa masiginecha nemaMarketo email matemplate.
Salesforce - Gadzirisa yako siginecha kushambadzira neveSalesforce mishandirapamwe uye mishumo. Iwe unogona zvakare kusanganisa masiginecha neVisualForce matemplate.
SalesLoft - Inoshandisa siginicha yeSigstr uye mushandirapamwe kune yako Cadence email kutaurirana
Pardot - Gadzirisa yako siginecha kushambadzira nePardot mishandirapamwe uye mishumo. Iwe unogona zvakare kusanganisa masiginecha nePardot email matemplate.
Kumbira Sigstr Demo
Tags: Chiito-Onactonacton email masiginechamabhenae mishandirapamweemail signatureemail signaturekutevera kwezisoheatmaphubspothubspot email masiginechamarketomarketo email masiginecharuregereropardot email masiginechasalesforce email masiginechasiginichasigstr